Munaasabad Abaal Marinno Lagu Guddoonsiiyay Mas’uuliyiintii Fulisay Dib U Habaynta Garsoorka Dalka Oo Lagu Qabtay Hargeysa | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Munaasabad Abaal Marinno Lagu Guddoonsiiyay Mas’uuliyiintii Fulisay Dib U Habaynta Garsoorka Dalka Oo Lagu Qabtay Hargeysa
August 10, 2016 - Written by Mustafe Faro
hargeysa (Hubaal) Xaflad ballaadhan oo ilyartu is qabatay isla markaana ay ka soo qayb galeen Madaxweyne ku-xigeenka Soomaalilaand Mud. Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Garyaqaan Aadan Xaaji Cali, Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda Md. Axmed Cadarre, taliyaha ciidanka bilayska Soomaalilaand Sarreeye Guuto Cabdillahi Fadal Iimaan iyo taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta, laguna abaal marinayay bahda caddaaladda ee ugu hawl karsanaa sannadkii ugu danbeeyay ayaa lagu qabtay hudheel Maansoor.
Xafladdan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qaybgaleen marti sharaf kale sida SONSAF oo ururrada bulshada ka socotay, hay’adaha wada shaqaynta la leh Caddaaladda sida UNDP ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay madashaas isu-duwaha maxkamadaha guur-guura: Sharma’arke Yuusuf Faarax oo sharraxay muhiimadda ay leeyihiin maxkamadaha guur guura iyo baahida Qaranku u qabo in la helo shaqaale hufan oo dalkooda iyo dadkoodaba ugu shaqeeya caddaalad iyo sinnaan. Isagoo arrimahaas ka hadlaya wuxuu yidhi Sharma’arke, “Ujeeddada aanu kulankan maanta u qabannay waxay ka danbaysay kulan hawleed saddexdii cisho ee ugu danbeeyay ka socday madashan kaas oo lagu lafa gurayay faa’idada iyo baahiyaha ay dadweynuhu u qabaan maxkamadaha guur guura. Runtii hal-ku-dhigga aan ka duulaynnay waa in muwaadin kasta oo aanay duruufuhu u saamaxayn inuu yimaaddo Maxkamadda Sare halkiisa loogu tago si loo dhagaysto kaddibna looga hawl-galo tabashadiisa. Sidoo kale, waxa halkan shahaadooyin loogu guddoonsiin doonaa guddoomiyayaashii maxkamadaha rafcaannada iyo gobollada, kaaliyayaashii iyo guddida caddaaladda.” Intaas kaddib waxa ka-soo-qayb galayaashu ku nasteen filim kooban oo laga sameeyay horumarradii is-daba-joogga ahaa iyo guulihii ay Soomaalilaan ka gaadhay geesta caddaaladda muddadii uu xilka hayay Bare Sare Aadan Xaaji Cali Axmed. Filimkaas oo muddo kooban socday wuxuu dadweynaha u soo bandhigay muuqaallo muujinaya heerka ay caddaaladda Soomaalilaan maanta marayso. Sidoo kale, wuxuu filimku soo bandhigay kalsoonida buuxda ee shacabka Soomaalilaan ku qabaan bahda caddaaladda guud ahaan, gaar ahaanna maxkamadaha.
Waxa isna halkaas ka hadlay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare isla markaan ah guddoomiyaha Guddida Caddaaladda Garyaqaan Aadan Xaaji Cali. Prof Aadan Xaaji Cali, guddomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaalilaan wuxuu ku dheeraaday baahida loo qabo caddaalad isagoo tibaaxay in bulsho aan haysan caddaalad iyo sinnaan aanay nolol ku naalloon karin. Guddoomiyuhu wuxuu ku nuuxnuuxsaday dedaallada joogta ah ee ay ugu jiraan sidii is-beddel dhab ah looga samayn lahaa caddaaladda dalka isagoo tilmaamay in tallaabooyin hor leh oo ay wax ku beddeleen ay hore ba u sameeyeen, welina ay wadaan.
Geesta kale, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Garyqaan Aadan Xaji Cali wuxuu ammaan u soo jeediyay shacbi weynaha Soomaalilaan oo uu sheegay inay haatan si weyn kalsooni u siiyeen hiil iyo hooba na la garab taagan yihiin. Ugu danbayntii Guddoomiyaha Maxkamadda Sare wuxuu si weyn u ammaanay shaqaalaha ka hawl-gala caddaaladda dalka sida guddoomiyayaasha maxkamadaha degmooyinka, rafcaanka iyo gobollada, kaaliyayaasha, garsoorayaasha kuwaas oo uu sheegay inay baal dahab ah ka galeen taariikhda Soomaalilaan, isagoo u soo jeediyay inay sii laba jibbaaraan u shaqaynta bulshadooda si loo dhiso kalsoonida shacabka.
Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda Md. Axmed Faarax Cadarre Cadarre iyo Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka Xasan Axmed Aadan ayaa iyaguna ka warramay heerka ay caddaaladda Soomaalilaan maanta marayso. Sidoo kale, waxay carrabka ku adkeyeen baahida ummad kastaa u qabto sinnaan iyo caddaalad. Ugu danbayn waxay ammaan u soo jeediyeen Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaalilaan Garyaqaan Aadan Xaaji Cali oo ay ku tilmaameen nin kasbaday kalsoonidii bulshadiisa, waxay sidoo kale ku bogaadiyeen barnaamijka maxkamadaha wareega oo ay ku tilmaameen guul weyn oo Qaranku gaadhay.
Taliyaha ciidanka bilayska Soomaalilaan Sarreeye Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan ayaa tilmaamay is-beddeka dhabta ah ee Wasaaradda Caddaaladda iyo Maxkamadda Sare ku tallaabsadeen muddadii uu xilka hayay Garyaqaan Aadan Xaaji Cali. Taliye Fadal oo arrimahaas ka hadlya ayaa yidhi, “Annaga(booliska), xeer ilaalinta iyo caddaaladda ba waxa naga dhaxeeya wada shaqayn fiican. Runtii is-beddel weyn oo mug iyo miisaan ba leh ayaa lagu sameeyay maxkamadaha dalka, gaar ahaan markii madaxweynaha Soomaalilaan Maxkamadda Sare u magacaabay Garyaqaan Aadam Xaaji Cali Axmed.”
Ugu danbeyn, waxa madasha ka hadlay madaxweyne-ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo isagu ku dheeraaday ahmiyadda ay caddaaladdu u leedahay aadamaha oo dhan. Si gaar ah, waxa uu madaxweyne-ku-xigeenku u ammaanay heerka ay maanta marayso Caddaaladda Soomaalilaan taas oo uu sheegay inuu gadh-wadeen ka yahay aqoonyahan da’ yar oo si weyn bulshadiisu ula ashqraartay habka iyo hannaanka uu u maray hagaajinta caddaaladda isagoo kasbaday kalsoonida shacbigiisa. “Dawlad ahaan waxa naga go’an helitaanka sinnaan, caddaalad iyo wanaagga bulshada. Waxaanu si weyn u taageeraynnaa dedaallada joogtada ah ee uu hormuudka ka yahay Prof. Aadan Xaji Cali Axmed kaas oo daarran dib-u-habaynta caddaaladda waddanka.” Ayuu ku soo gebogabeeyay madaxweyne-ku-xigeenka Soomaalilaand.
Ugu danbeyntii waxa shahaadooyin abaal marin ah la guddoonsiiyay mas’uuliyiintii qaybta weyn ka qaatay dib-u-habaynta caddaaladda dalka kuwaas oo ahaa heer degmo iyo heer gobol ba iyo dabcan Guddida Caddaaladda oo uu hormuud u yahay Garyaqaan Aadan Xaaji Cali.